Kuratidza zvinyorwa neelebheri vheya
Turnout tower Černá hora (Panorama)
Chikamu chepakutanga chemotokari yekare yekare kubva 1928 chave chashandiswa seshongwe yekutarisa kubva muna 1998. Iyo yekutarisa chikuva pakukwirira kwemamita makumi maviri nemasere pamakumi mashanu nemakumi mapfumbamwe nemashanu pamusoro pegungwa rinopa maonero akasiyana-siyana kwete chete enzvimbo asiwo neyakakura chikamu cheGiant Mountain. Kushandisa teresikopu ndeyemahara.
Iyo yekutarisa gallery imamita mana pazasi pemusangano uye munguva yechando zviri nyore kukwira kunyange mune ski bhutsu.
Mune mamiriro ekunze akanaka iwe unogona kuona Jeseníky Makomo, Orlické Mountain, Bohemian-Moravian Highlands, iwo anotaridzika ezvikamu zveBohemian Paradise uye yepedyo Poland.
Yakataridzika shongwe paČerná hora yakavhurika gore rose.
Jára Cimrman Lighthouse
Jára Cimrman Lighthouse ndiye mudiki pane matanda akatarisa muJizera Mountains. Muimba iri pasi pekucherechedza shongwe ndiyo Jára Cimrman Museum, iyo yakavhurwa pamwe ne Lighthouse; kupinda kune shongwe iri kuburikidza nemu museum. Chivako chiri mumusha wePříchovice munzvimbo yepastastral yePříchovice pedyo neKořenov, musha weKořenov, ruwa rweJablonec nad Nisou pasi pePříchovice ridge.
Nzvimbo yekucherechedza yakavakwa pakati pe2011 ne2013 maererano neprojekti yeHutě architektury Martin Rajniš, Is 23,7 m high (kana 25,6 m high). Masitepisi e115 anotungamirira kumusvingo wekutarisa. Danda rePine rakashandiswa sechinhu chekuvaka, uye chimiro chayo chepakutanga chiedza.
Kuvakwa kwemuseum uye chivakwa chekutarisa, chinoita mamirioni mana, chakapihwa mari nevaridzi vepedyo Pension U čápa vasina rubatsiro rweEurope. Nechepedyo yechivako ichi chakavakirwa panzvimbo yeichimbova marara uye yekupfura nzvimbo Na Sluneční Park, vanyori vemu studio Kutyisa Mwana / Enfant Anotyisa, huni zvinhu zvakagadzirwa na David Smrčka, Jaromír Bernart, Lenka Klodová naAdward Spolnik. The chirongwa…
U Borovice Lookout Tower Vysoké nad Jizerou, Roprachtice
Iyo yekutarisa shongwe U Borovice iri pazita rimwe chete nehupamhiriri hwemamita makumi matanhatu nematanhatu kuchamhembe kwemusha Roprachtice, kuruboshwe kwemugwagwa Nha. 669 munzira yaSemily - Vysoké nad Jizerou.
Kuvakwa kwakaitwa nemumwe muzvinabhizimusi akazvimirira, František Hubař anobva kuRoprachtice. Iko kuvaka kwakatanga muna Kubvumbi 2008, kuvhurwa kukuru kwakaitika musi wa 17 Mbudzi 2009. Iyo dombo remamita e4,7 x 4,7 metres ine mukati mezvidhinha mataira uye kukwirira kwemamita gumi nematanhatu. Pamusoro payo imba yematanda yakaomeswa, iri basa remuti wekuveza Václav Pacholík. Matanho makumi manomwe anotungamira kune padenga rekutarisa gallery.
Muna 2010, shongwe yekutarisa yakavakwa basa rekuvaka pamwe nenzvimbo dzekudyidzana. Iyo imba yemapuranga ine hurongwa hwepasi hwemamita masere kusvika gumi nemaviri - zvakare ibasa revezi Pacholík. Pakati pa8 na 12, ichi chivakwa chakawedzerwa nechimwe chikamu chezvidhina. Panguva iyoyo, fotovoltaic simba chirimwa chingangoita 2015 kWp yakaiswawo. Ichi chirimwa chemagetsi chinoshanda muchimiro chechitsuwa uye chinongopa chete iyi shongwe yekuona.
View point ski kusvetuka muLomnice nad Popelkou
Iyo yekutarisa gallery pane yakagadziriswazve bhiri K-70 inowanikwa munzvimbo ski V Popelkách. Iyo nzira yekufamba inowanikwa pakukwirira kwemamita makumi maviri nemasere uye inopa maonero akanaka kwete chete enzvimbo ski asiwo yenzvimbo yakapoterera.
Lomnice nad Popelkou (ChiGerman Lomnitz an der Cinderella) iguta riri muSemily District muLiberec Region. Kune vanogara vanenge 5 500 vagari. Iri mumupata wakakura weRwizi rweCinderella munzvimbo yakatenderera pamuganho weBohemian Paradise uye Makomo eGiant, anenge makiromita gumi kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reSemily.
Parizvino, guta rinopa mitambo uye zvetsika zviitiko (theatre, sinema, chateau, guta remyuziyamu uye gallery, puppet theatre, mutambo wemitambo, ice rink, zhizha nhandare, kukwira madziro, ski resort muCinderella ine zvakasununguka nzvimbo yekutarisa gallery pane yekudyira bhiza, mitambo airport, dziva rekushambira, spa imba nezvimwewo). Nekutenda kune dense network yekufamba munzira dzinofamba munzira, kutenderera nemabhasiketi, nzvimbo dzakawanda dzevashanyi dzakadai seshongwe yekutarisa, nzvimbo yekudyira uye nzvimbo yemwaka yemwaka paMount Tabor…
U Borovice Lookout Tower Roprachtice Vysoké nad Jizerou
Benecko anotarira chivakwa paZalem
Žalý (Heidelberg muchiGerman) igomo riri mugomo rekupedzisira regedhi re "ýalsk in" pakati peGiant Mountain makiromita 1,5 kumabvazuva kweBenecko. Iro gomo riri muKirkonoše National Park. Shure Zaly (Hinterer Heidelberg weGerman) - iyo yakakwirira yemapuru ese ari pamakumi matanhatu nemakumi matanhatu nemashanu pakureba pa1036 ° 50'39 ″ N, 54 ° 15'34 ″ E. Yakavezwa kunge pfupi pfupi girazi kumashure, yakagadzirwa nemapyllites uye gneisses. Maodzanyemba-kumabvazuva kwemusangano, kune dombo rakasarudzika rakanzi calledalský gomo rembudzi, rinowira pasi mumupata weElbe. Kuyerera kwerukova kuri kumanikidzwa kupfuura nepadombo iri risingapindiki nedombo rakapinza. Mberi Žalý (Vorderer Heidelberg muchiGerman) - yakadzika uye yekumaodzanyemba pakakwirira pakureba gumi nemakumi mairi nemashanu pakureba pa6 ° 1019'50 ″ N, 39 ° 29'15 ″ E Iyo inonyanya kuve ne orthogneisses yakaumbwa kuva yakaderera cumulus knot ine ine rusinga shamisi madziro. Pamusoro pane shongwe yekutarisa ichibva pane iyo yakanakisa maonero eGiant Mountain uye Giant Mountain. Kumabvazuva kumahombekombe egungwa kune chiteshi chekumusoro kweiyo Ski Resort Herlíkovice, iyo…
Turnout shongwe paZalec Benecko
alý (Heidelberg muchiGerman) igomo riri mugomo rekupedzisira regedhi Žalský munzvimbo yepakati peGiant Mountain makiromita 1,5 kumabvazuva kweBenecko. Iro gomo riri muKirkonoše National Park. Rear Zaly (Hinterer Heidelberg weGerman) - iyo yakakwirira yemapuru ese ari pamakumi matanhatu nemakumi matanhatu nemashanu pakureba pa1036 ° 50'39 ″ N, 54 ° 15'34 ″ E. Yakavezwa kunge pfupi pfupi girazi kumashure, yakagadzirwa nemapyllites uye gneisses. Maodzanyemba-kumabvazuva kwemusangano, kune dombo rakasarudzika rakanzi Žalský gomo rembudzi, rinowira pasi mumupata weElbe. Inoyerera rwizi rwacho inomanikidzwa kupfuura ichi dombo risingapindiki nedombo rakapinza. Mberi Žalý (Vorderer Heidelberg muchiGerman) - yakadzika uye yekumaodzanyemba pakakwirira pakureba gumi nemamita gumi nemashanu uye yakadzika pa6 ° 1019'50 ″ N, 39 ° 29'15 ″ E. Iyo inonyanya kuve ne orthogneisses yakaumbwa kuva yakaderera cumulus knot ine akaomeswa emadziro. Pamusoro pane shongwe yekutarisa ichibva pane iyo yakanakisa maonero eGiant Mountain uye Giant Mountain. Kumabvazuva kumahombekombe egungwa ndiko kuchamhembe kwesituift Ski Resort Herlíkovice, iyo…
Lookout tower Zaly Benecko kubva kumusoro
Štěpánka kutarisa shongwe
Štěpánka (yeGerman Stephanshöhe) ibwe Neo-Gothic yekutarisa shongwe paHvězda Hill kumadokero kweKrkonoše Mountain, paPříchovice Ridge. Inowanikwa munzvimbo ye cadastral yePříchovice padyo neKořenov, musha Kořenov, mudunhu Jablonec nad Nisou. Iyo shongwe yakakwira makumi maviri nemashanu pakakwirira. Iyo nhare yekutarisa inopa kuona kwakanaka kweGiant Mountain, iyo Jizera Makomo, asiwo Zvičina, Mužský, Bezděz, Ralsko neLusatia Mountain. Kuvakwa kweshongwe yekutarisira yakatanga muna 24 uye Štěpánka (pamwe chete neAtalý yekutarisa chivakwa) ndeimwe yedare rekare rekutarisa munzvimbo yeKrkonoše uye Jizera Makomo. Muna June 1847, maneja maneja akashanyira Archduke Štěpán, maneja wepurovhita, uyo ari pasi pekutenderera kweiyo kuramba yakavakwa yeumambo "Krkonoše" nzira kubva kuLiberec uchienda kuTrutnov (nhasi mugwagwa I / 1847) akakwira gomo Hvězda uye mukuremekedza kwake Prince Kamil Rohan akatumwa iyo yaakatumidza "Stephanshöhe" = "tarisiro yaStepan." Asi kwapera gore Archduke akadaidzwazve kuHungary uye Muchinda Rohan akarasikirwa nechido chake mukuenderera mberi kwekutarisirwa. Mugore rekutanga, chete the…